कोरोना स during्कटकालको समयमा पैसाको ठूलो मूल्यह्रासले हाइपरइन्फ्लेसन निम्त्याउँछ: बिटकइनको समाधान हो? : मार्टिन Vrijland
"फिएट मनी" वा "विश्वासघात पैसा" भनेको पैसा हो जुन यसबाट बनाइएको सामग्रीबाट प्राप्त हुँदैन (जस्तै सुन र चाँदीका सिक्का), तर विश्वास र विश्वासबाट कि यो वस्तु र सेवाहरू किन्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैले मूल्य निश्चित वजन र बहुमूल्य धातुको सामग्रीमा आधारित छैन, तर विश्वासले आर्थिक अपरेटरहरूले मुद्राको मूल्यमा राख्दछ भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ।
जहाँ तपाईंसँग सुन वा चाँदीका सिक्का धेरै पहिले थियो, त्यो मूल्य कत्ति चाँडो र कति सुन वा चाँदीमा खानी गर्न सकिन्छ भन्नेमा जोडिएको थियो। कागजको परिचयको साथ, प्रिन्टि press प्रेस खोल्न सकिन्छ। 'कम्प्युटरमा नम्बरहरू' पैसाको साथ, ओपेक डलर मानक र तेल उत्पादनको लिंकले कभरेज प्रदान गर्नुपर्‍यो। ती सबै मापदण्डहरू कोरोना स during्कटको बेला जहाजमा हालेका थिए।
केन्द्रीय बैंकहरूले असीमित पैसा प्रिन्ट गर्छन्। तिनीहरू यो गर्छन् किनकि पैसाको माग बढ्दो छ। एक सरकारको रूपमा तपाईले ती सबै सहयोग प्याकेजहरू प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ जससँग तपाईले बाँच्नको लागि रकम जम्मा गर्नुभयो?
किन पैसा कभरेज यति महत्वपूर्ण छ?
जब तपाईंसँग अझै चाँदी र सुनका सिक्काहरू थिए, जनसंख्या बढ्दै जाँदा र व्यापार बढ्दै जाँदा त्यस मुद्राको लागि माग बढ्थ्यो। यसको मतलब तपाईसँग ब्याटर गर्न अझ बढी सिक्का हुनुपर्दछ। म तपाइँको उत्पादन किन्छु र यसको बदलामा तपाइँलाई निश्चित मूल्यको साथ धेरै स coins्ख्याको सिक्का दिन्छु। तपाईं ती सुनको सिक्काबाट तपाईंलाई चाहिने चीजहरू खरीद गर्न सक्नुहुन्छ।
किनभने त्यस समयमा तपाईंलाई थाहा थियो कि जमीनबाट चाँदी वा सुन निकाल्नु श्रममूलक प्रक्रिया हो, तपाईंलाई थप सिक्का पनि थपिनेछ भनेर थाँहा थियो, तर अझ धेरै सिक्काको आवश्यकता भनेको त्यो सिक्का अचानक एक हप्तामा देखा पर्नेछ भन्ने थिएन। मूल्यमा आधा रह्यो। जे भए पनि, त्यसले त्यो सामग्री भुइँबाट निकाल्न र सिक्कामा पिघल्न समय र प्रयास लिए। त्यसोभए तपाईले अर्को हप्ता केहि पैसा किन्न केही समयको लागि तपाईको पैसा सुरक्षित रूपमा राख्न सक्नुहुनेछ, कि एक सुनको सिक्का आधा जति मूल्यको छ भन्ने डर बिना।
जब ती भारी सिक्का कागजको पैसाले बदलियो, यो धेरै सजिलो भयो। कागज प्रिन्ट गर्न सजिलो छ। त्यसको लागि केन्द्रीय बैंकहरूले केवल प्रिन्टि press प्रेस खोल्नु परेको थियो। त्यो अझै समय र प्रयास लिए, तर यो पहिले देखि नै सरल छ। यस कागज इसलिए सुन खानी संग जोडिएको थियो। त्यो सुनको मानक भयो। उदाहरण को लागी, पैसा प्रिन्टिंग गति मा जोडिएको छ जुन सुन खानीहरु सुन खानी गर्न सक्छ, ताकि तपाईं मूल्य मा छिटो गिरावट रोक्नुभयो।
विश्वको जनसंख्या र व्यापार बढ्दै जाँदा पैसाको आवश्यकता बढ्दै जाँदा यो सुनको मानकलाई कुनै समय छोडियो। त्यस्तै ओपेकको स्थापना भयो। यो तेल संगठनले पैसा उत्पादनलाई तेल उत्पादनसँग जोड्नुपर्‍यो। त्यसकारण विश्वव्यापी सम्झौताहरू देशहरूले उत्पादन गर्न सक्ने तेलको ब्यारेलको मात्राको बारेमा थियो। डलर तेलको उत्पादनसँग जोडिएको थियो, त्यसैले यदि तपाईं डलर प्रिन्ट गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईंले पंप पचाएको तेलको मात्रा अनुसार मात्र गर्न सक्नुहुनेछ।
त्यो तेल मानक लामो समयदेखि जारी गरिएको छ र अब त्यहाँ कुनै कभरेज छैन। यस समयमा, केन्द्रीय बैंकहरूले 'फिएट मनी' सिर्जना गर्दैछ। यसको मतलब तिनीहरूसँग पैसा छाप्नमा कुनै प्रतिबन्धहरू छैनन् र किनभने यो कुनै ग्यारेन्टी छैन कि यो गतिसँग सम्बन्धित छ जुन भूमिबाट सुन वा तेल निकाल्न सकिन्छ, पैसाको अवमूल्यन रोकिदैन। तपाईं १ हप्ता भित्र ठूलो मौद्रिक अवमूल्यनको अनुभव लिन सक्नुहुन्छ।
असुरक्षित फ्याट पैसाको अभ्यासमा के अर्थ हुन्छ?
अभ्यासमा, यसको मतलब पैसा चाँडै पतित हुन जान्छ। कोरोना स during्कटको बेला सयौं अरबौं डलर र यूरो छापिएको थियो। यसको मतलब त्यो डलर र यूरो केवल कम मूल्यवान छ। ढिलो होस् वा चाँडो, यसले स्टोरहरूमा मूल्यमा असर पार्नेछ।
अब केन्द्रीय बैंकहरु पैसा को अवमूल्यन मास्क गर्न को लागी चालहरु संग आए। उदाहरणको लागि, यदि तपाईं एक बहुराष्ट्रिय कम्पनीको रूपमा ठूलो बैंकबाट पैसा bण लिनुहुन्छ भने, त्यो ठूलो बैंकले त्यो पैसा केन्द्रीय बैंकबाट लिएको छ। ती केन्द्रीय बैंकहरूले अझ बढी पैसा प्रिन्ट गर्छन् (राम्रोसँग तिनीहरू वास्तवमै प्रिन्ट गर्दैनन्, उनीहरूले आफ्नो कम्प्युटर प्रणालीहरूमा स increase्ख्या बढाउँछन्) ती बहुराष्ट्रियहरूबाट secण सुरक्षा (बन्डहरू, debtणको प्रमाण) फिर्ता किन्नका लागि।
मानौं एउटा कम्पनीको १० करोड .ण छ। यदि ईसीबीले अब उक्त कम्पनीबाट secण धितोहरू खरीद गर्यो भने त्यो कम्पनीले वास्तवमा १० करोड नि: शुल्क प्राप्त गर्यो। त्यो कम्पनीले पैसाबाट आफ्नै सेयरहरू फिर्ता किन्न सक्दछ वा गिर्दो प्रतिस्पर्धीहरूलाई खरीद गर्न सक्दछ।
यस तरिकाले तपाईले यो सुनिश्चित गर्नु भयो कि जनताले सोच्दछन् कि अर्थव्यवस्था अझ राम्रो स्थितिमा छ। अभ्यासमा, तथापि, तपाईंले तुरून्त मौद्रिक मूल्यह्रासमा १० करोड गर्नुभयो। अब केहि सयौं मध्ये सय मिलियन केवल थोरै प्रतिशत मात्र हो, त्यसैले यदि तपाईले debtणको पर्वतलाई उच्च बनाउनुभयो भने, मूल्यह्रास प्रभाव प्रतिशत शर्तहरुमा घट्ने देखिन्छ। केन्द्रीय बैंकहरु विश्वास गर्छन् जस्तो लाग्छ कि उनीहरूले उच्च माउन्टेन बनाए, प्रतिशतको रूपमा सानो अवमूल्यन प्रभाव।
त्यो हामी अमेरिकामा अहिले देख्छौं, र त्यो हामी युरोपमा पनि देख्छौं। Debtणको पहाड अत्यधिक फुलाएको छ। यद्यपि, विश्वव्यापी रूपमा सबै वित्तीय विज्ञहरू सहमत छन् कि विशाल मौद्रिक अवमूल्यन लुकिरहेको छ।
त्यो सुनको सिक्कासँग तुलना गर्नुहोस्। तपाईंले आलूको झोला बेच्नुहुँदा गत हप्ता त्यो सुनको सिक्का लगभग यस हप्ता जति नै मूल्यवान छ, किनकि सुन यति चाँडै खानी गर्न सकिदैन। यद्यपि तपाईको बैंक खातामा यूरो चाँडो मूल्य हराइरहेको छ किनकि यति धेरै पैसा छिटो छापिन्छ कि मान एकदम चाँडो खस्छ।
Bitcoin नयाँ सुनको मानकको रूपमा
बिटकॉइनको बेनामी निर्माता धेरै स्मार्ट समाधानको साथ आएको छ जुन खानीको सुनको सम्झना दिलाउँछ।
हामी त्यस्ता क्रिप्टो सिक्काको बारेमा अलि संशयवादी हुनुपर्दछ, किनभने यसले प्रत्येक लेनदेनलाई ट्रसेबल बनाउन सम्भावना प्रदान गर्दछ। साथै तथ्य यो छ कि २०१ Microsoft मा माईक्रोसफ्ट प्याटेन्ट २०२०-०2020०060606०XNUMX दायर एउटा संकेत हो कि cryptocurrency 'चीजहरूको इन्टरनेट' मा जोड्न सकिन्छ; जसमा हामी आफैं ती 'चीजहरू' मध्ये एक बन्न सक्छौं।
अझै हामी ट्रसेबल डिजिटल पैसाको युगमा छौं। सबै पछि, यो पैसा हो कि तपाईं आफ्नो अनुप्रयोग वा बैंक कार्ड मार्फत पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। कागजी मुद्राको आगामी उन्मूलनको साथ, हामी पहिले नै फेला पार्न योग्य डिजिटल वेबमा छौं। त्यो पैसाको साथ अतिरिक्त समस्या यो क्षणमा यो पनि हो कि यो अत्यन्त चाँडै नै अवमूल्यन भइरहेको छ।
सतोशी नाकामोटो एक अज्ञात व्यक्ति वा समूहको छद्म नाम हो जसले क्राइप्टोरोन्सी बिटकोइन डिजाइन गरे र पहिलो ब्लकचेन डाटाबेस स्थापना गरे। हामी आश्चर्यचकित हुन सक्छौं कि यदि हालको वित्तीय प्रणाली क्र्यासले हामीलाई बिटकोइनतर्फ नयाँ मानकको रूपमा सार्न योजना गरेको छैन भने। त्यसका साथ तपाईंले सायद सोच्न सक्नुहुन्छ कि यदि सतोशी नाकामोटो एकै कुलीन पावर समूहबाट मात्र होईन।
यद्यपि बिटकइन प्रणाली धेरै चलाखीपूर्वक संकल्पित छ र वास्तवमा सुन खानीको सिद्धान्तमा आधारित छ। बिटकइनको एक रकम मार्केट गर्न, बिटकोइनहरू खानी गर्नुपर्दछ। त्यो भूमीमा स्प्याटुलाहरू र फावडेसँग सम्भव छैन, जस्तै सुनको साथ, तर धेरै द्रुत कम्प्युटरहरूसँग जुन कि उच्च खरीद मूल्य छ र यसले धेरै ईन्धन (पावर) खपत गर्दछ। यसले सुनिश्चित गर्दछ कि सबैले मात्र बिटकोइनहरू उत्पादन गर्न सक्दैनन्।
बिटकोइन्स उत्पादनको प्रक्रियालाई 'खनन' भनिन्छ, जुन वास्तवमा खानीबाट सुन खानीको सम्झना दिलाउँछ। यो खनन प्रक्रियाको मतलब कम्प्युटरहरूले गणित सूत्र सुल्झाउनु पर्छ जुन यति जटिल छ कि समाधान फेला पार्न केहि दिन लाग्न सक्छ। यद्यपि नेटवर्कमा धेरै कम्प्युटरहरू रहेकाले सुत्रको जटिलता बढ्दछ। अधिक मानिसहरू जो खनन सुरु गर्छन्, समाधानको गणना गर्न गाह्रो हुन्छ।
प्रत्येक चोटि त्यस्ता कम्प्युटरले सूत्र सुल्झाउँदा, १ बिटकोइन सिर्जना हुन्छ। यस गणनाको लागि धन्यबादको रूपमा, खानीले पुरस्कारमा बिटकइनको अंश पाउदछ।
खेललाई अझ जटिल बनाउन, पुरस्कार चार चार बर्षमा आधा काटिन्छ। यो आधा संयोगले यो हप्ता भयो। मे १२ मा सटीक हुन। त्यसोभए यदि तपाईले १२ मे भन्दा पहिले १ बिटकोइन माइनमा व्यवस्थापन गर्नुभयो भने, तपाईले त्यसको लागि x% पाउनुभयो। मे १२ पछि, त्यो रकम आधा काटियो। यसको मतलव केहि खनिजहरूले नयाँ "spatulas" र "फावड़ियों" किन्न सक्दैनन् उनीहरूको खुट्टा काम गर्न। तिनीहरूले अब बिजुली बिल तिर्न सक्दैनन् वा अब उप्रान्त मेरो सबैभन्दा द्रुत कम्प्युटरहरू किन्न सक्दैनन्। तिनीहरू माथि झर्छन्।
यदि तपाईं यो सुन्नुहुन्छ भने, तपाईं तुरून्त सोच्न सक्नुहुन्छ: यसले एकाधिकारमा जान्छ। यसको मतलब यो छ कि धनी कम्पनीहरू फेरि एक ठूलो खानीमा परिणत हुनेछन् र त्यसैले तपाईं चाँडै नै केन्द्रीय बिन्दु पाउनुहुनेछ जहाँ सबै खनन हुन्छ। कथा यद्यपि नेटवर्कमा धेरै कम्प्युटरहरू गुमाएपछि गणना सूत्र पनि समानुपातिक रूपमा घट्छ। यसको फलस्वरूप spatulas लिन र फावानी सुरू गर्न नयाँ खनिकहरुलाई उत्तेजित गर्दछ।
जे होस् तपाईले यसलाई फर्काउनु भयो वा फेर्नु भयो भने तपाईले यहाँ स्केलमा वृद्धि देख्नु हुनेछ र जोखिम छ।
यद्यपि, अधिक र अधिक ठूला लगानीकर्ता बिटकइनको संचालनको सिद्धान्तमा रुचि राख्छन्, यो खानी प्रक्रियाको कारण नै। जे भए पनि, यो जटिलताको सम्झना दिलाउँछ जुन तपाईं जमिनबाट सुन निकाल्नुहुन्छ र त्यसैले यो विगतको सुनका सिक्का र 'ब्रेक एण्ड ब्रेक' को सम्बन्धित निश्चिततासँग तुलना गर्न सकिन्छ। यसैले तपाईले देख्नुभयो कि त्यहाँ अहिले बिटकोइन ट्रेडिंगमा धेरै सयौं अरबौं छन्।
त्यसैले बिटकॉइनसँग नयाँ सुनको मानक गठन गर्ने क्षमता छ। यो हुनसक्छ, यो मौद्रिक मूल्यह्रासमा त्यो ब्रेक प्रदान गर्न सक्दछ जुन हामीसँग वर्तमान फिएट प्रणालीको अभावमा छ।
Bitcoin मा मुद्राहरू लिंक गर्नुहोस्
प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको आह्वानमा I हिजो प्रकाशित, मैले एक "सुनको मानक" को रूपमा बिटकॉइनमा पैसा जोड्ने कुरा गरें। तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ पैसा कुनै चीजसँग जोडिएको हुनुपर्दछ। तपाईं मानकको रूपमा वास्तविक भौतिक सुनमा फर्केर जान सक्नुहुनेछ, तर त्यसोभए तपाईंले सुन बाहिर जमिनबाट बाहिर निकाल्नु पर्छ र त्यो पर्यावरण अनुकूल नै छैन। पावर-भोका कम्प्युटरहरू वातावरणको लागि पनि यत्तिकै राम्रो छैनन्, तर हामी अधिक र अधिक प्रविधिको उदाउँदो देख्दछौं, जसले बिजुलीलाई बढी वातावरण मैत्री बनाउन सक्छ र त्यसैले तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ कि प्राथमिकता बिटकॉइन "सुनको मानक" को लागि हुनुपर्छ।
यो स्पष्ट छ कि त्यहाँ फेरि "सुनको मानक" हुनुपर्नेछ। अन्यथा हामीले हाइपर मौद्रिक अवमूल्यनको सामना गर्नुपर्नेछ। त्यो नै कोरोना संकटको समयमा भइरहेको छ। नयाँ सुनको मानकमा पुनःसेट पावर पिरामिडमा रिसेटको साथ हुनु पर्छ। जहाँ अब लाइनहरु चल्छ र अधिक शक्ति एक सानो धनी समूहमा जान्छ, शक्ति जनताको हातमा आउनु पर्दछ।
जनतामा शक्ति फर्काउने पक्कै पनि ऐतिहासिक घटना हुनेछ। इतिहासमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन। तैपनि उही टेक्नोलोजी जसमा बिटकॉइन आधारित छ, अर्थात् ब्लकचेनले मानिसहरूलाई प्रत्यक्ष निर्णय गर्ने शक्ति प्रदान गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ। तपाईले समाजको सम्पूर्ण संरचनाको जाँच गर्नुपर्दैन, तर तपाईले व्यवस्थापन परिवर्तन गर्नुपर्दछ।
उदाहरणको लागि, तपाईले मन्त्रीहरूको नेतृत्वमा मन्त्रीहरू हुन सक्नुहुनेछ जुन जनताद्वारा मनोनयन गरिएको थियो र जसले मानिसहरूलाई रिपोर्ट गर्दछन्। मुकुटमा वफादारिताको सट्टा उनीहरू अब जनतामा निष्ठाको कसम दिन्छन्। यो सम्पूर्ण सिभिल सेवा र सबै पेशामा लागू हुन्छ जुन अब सिंहासनमा बफादारी हुन्छ (न्यायाधीश, वकिल, पुलिस, निरीक्षक, लागूकर्ता, आदि)।
अवश्य पनि तपाईले सबै कुरा रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्न र व्यक्तिलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्न, त्यसैले एक सरलीकरण चरण हुनुपर्दछ। प्रश्न यो छ कि जनता यस्तो क्रान्तिका लागि प्रेरित हुन सक्छ वा एलन मस्क र बिल गेट्स जस्ता एक अरबपतिले हामीलाई विश्वास नगरेसम्म हामी फेरि एकपटक कुर्नेछौं, जसद्वारा हामी ब्लकचेनसँगको लिंकको साथ हुने जोखिम चलाउँछौं। हाम्रो मस्तिष्कलाई त्यो प्रणालीसँग जोड्दै वा त्यस्तो प्रणालीलाई भ्याक्सिन प्रमाणपत्रसँग जोड्दै।
यदि परिवर्तनलाई सुरूवात गर्ने अवसर छ भने, यो अब हो। हामीले त्यो अवसर बिर्सनु हुँदैन। जे होस्, यसको लागि हामीले आफैं आफैलाई चल्नु पर्छ।
यदि हामी परिवर्तन चाहन्छौं भने हामी दुई कुरा गर्न सक्छौं। वा हामी फिएट मनीको समस्या यति ठूलो नहोउन्जेल कुर्दछौं र मुद्रास्फीति यति कठोर हिट हुन्छ कि उर्जाको समान ब्वालार्कले समाधानको रूपमा हामीलाई नयाँ "स्वर्ण मानक" प्रदान गर्दछ। वा हामी आफैले शुल्क लिन्छौं।
के हामी मुद्रास्फीति यति उच्च हुनको लागि पर्खिरहेका छौं र हामी पावर पिरामिडको त्यस्तो निरंकुश नियन्त्रण वेबमा हुन चाहन्छौं कि त्यहाँ पछाडि फर्किएन? तब हामीसँग प्राविधिक प्रशासनको ग्यारेन्टी छ। भन्नुपर्दा हामी प्रत्येक तरीकाले एउटा प्रणालीमा जोडिएका छौं जुन टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर हामीलाई डिजिटल दास बनाउँदछ।
यदि हामी आफैंमा लगामहरू लिने छनौट गर्दछौं भने हामी ब्रेक राख्दछौं र अझै पनी यस टेक्नोलोजिकल विकासको उपयोगी पक्षबाट फाइदा लिन सक्छौं। त्यसो भए हामी ब्रेकहरू ए.आई. को निःशुल्क विकासमा राख्न सक्छौं र ब्रेकलाई पावरको केन्द्रीकरणमा राख्न सक्छौं।
प्रश्न यो हो, कि अब अवसर उपलब्ध छ कि तपाईं प्रेरणा को लागी पर्याप्त छ। प्रश्न यो छ कि त्यहाँ प्रकाश छ कि संभावना को लागी सयौं हजारौं देशीहरुलाई उत्प्रेरित गर्न पर्याप्त छ?
त्यहाँ जहाँ मानव मनोविज्ञान खेलमा आउँदछ, र त्यहि चुनौती धेरैको मानसिकतामा एक वास्तविक बदलावको लागि आउँछ। जे भए पनि, म आफूलाई ऐनामा आफूलाई हेर्न सक्षम हुन चाहन्छु र जान्छु कि मैले सक्दो राम्रो गरें। अवसर त्यहाँ छ, संभावनाहरु त्यहाँ छ। हामीले भर्खर यसलाई उठाउनु पर्छ र गर्नु पर्छ। यसलाई पिचफोर्क्स र बलहरू आवश्यक पर्दैन। यो केवल तपाइँको मानसिकता मा एक क्रान्ति लिन्छ।
एक अनलाइन प्रत्यक्ष मतदान प्रणालीको साथ, हामी नयाँ नेताहरू स्थापना गर्न सक्नेछौं जसले मानिसहरूलाई रिपोर्ट गर्दछन्, कानूनलाई स्पष्ट र सजिलो बनाउँदछ, फिएट मनी प्रणाली समाप्त गर्दछ र बिटकोइनमा नयाँ मुद्रा लि link्क गर्दछ। हामी या त यसलाई अक्षम्य रूपमा खारेज गर्न सक्छौं वा हामी प्रविष्टमा हिट गर्न सक्दछौं र याचिका भाइरल हुन दिनुहोस्। तपाईं भित्र हुनुहुन्छ?
वेबसाइट मार्टिन Vrijland मा भारी आक्रमण, तर हामी जारी हुनेछ!
ट्याग: Bitcoin, कोरोना संकट, डलर, यूरो, विशेष, fiat, geld, पैसा प्रणाली, सुनको मानक, आधा, आधा, मुद्रास्फीति, तेल, मूल्यह्रास, ओपेक, रिसेट गर्नुहोस्, क्रांति, सातोशी नामाटोटो, खोप प्रमाणपत्र
13 मई 2020 मा 11: 31
यहाँ खोज्नुहोस् किन बिटकइन खानीको सिद्धान्त निकै ठोस हुन्छ।
13 मई 2020 मा 12: 14
याचिका हस्ताक्षर गरियो, निकै नराम्रो मानिसहरु छन् जसले यो काम गरेका छन्।
13 मई 2020 मा 13: 46
यो व्यवहारमा बाहिर जान्छ कि मानिसहरू गुनासो गर्न मनपराउँदछन् र के गलत हुन्छ भनेर सुन्न मनपराउँछ, तर तिनीहरू परिवर्तन सुरू गर्न प्रयास गर्न चाहँदैनन्। प्रत्येक चार बर्षमा चुनावमा हिँड्नु र क्रस दिनु पर्याप्त रोमाञ्चक हुन्छ, आफैंलाई साँच्चिकै गर्न को लागी एक्लो बनाउन दिनुहोस् - यद्यपि यस अवस्थामा, त्यो निवेदनमा हस्ताक्षर गर्नु भन्दा बढि होइन। आन्दोलन जा रही प्राप्त गर्न।
त्यसोभए मानिस परिवर्तनमा विश्वास गर्दैनन् र स्पष्ट रूपमा यसलाई उनीहरूमाथि पार गर्न दिनुहोस्। धेरै व्यक्तिहरू जो आफू ब्यूँझन्छन् भन्छन् अभ्यासमा केही गर्दैनन्।
DWDD मा 'चिप्सको एक झोला हातमा' बाट, 'चिप्सको झोला हातमा लिएर' जेनसनलाई हेर्नु मात्र परिवर्तन हो जुन देखिन्छ 😉
13 मई 2020 मा 14: 17
खैर, सनक हुन सक्छ वा मेरो तर्फबाट यथार्थवादी। म दासहरूबाट केहि पनि आशा गर्दिन। तिनीहरू पक्कै पनि अधिक पैसा परिवर्तन गर्न चाहँदैनन्। दासहरू दासहरूमा राम्रो हुन्छन्। यो साह्रै शान्त थियो जब दासहरू 'कोरोना' को डरले सडकमा नलिए। मँ अहिले सबै आराम गरीरहेकी छु, तर उनी नैतिकताको वास्ता गर्दैनन् र के सहि छ। मदुरोडम परिवर्तन र क्रान्तिहरूको देश होइन। त्यो यहाँ दासहरु र व्यापारी मानसिकता को प्रकृति हो।
कमाराहरू अझै पनि ठीक छन्, कमसेकम कमसेकम हुने फाइदाहरू पनि यसका हानिहरू भन्दा बढी हुन्छन्। साथै, दासहरूको स्वार्थ र उनी निद्रा नबिर्सनुहोस्।
मार्टिन, तपाईं एक नायक हुनुहुन्छ, तपाईं एक मरेको घोडा तान्न आफ्नो सबै भन्दा राम्रो कोशिश ..
13 मई 2020 मा 15: 30
मेरो अनुभव त्यहाँ छ कि आलु को एक झोला मा अधिक व्यायाम छ।
13 मई 2020 मा 15: 40
आलुको सकारात्मक विशेषता छ कि तिनीहरू स्वाभाविक रूपले उम्रन्छन्। यदि तपाईंले जमिनमा आलुको त्यो झोला राख्नुभयो भने, तपाईंसँग केही हप्ता पछि आलुले पूर्ण कार्ट छ। मलाई लाग्छ कि तपाई आलुको झोलाको बारेमा बढि सकारात्मक हुनुपर्दछ। मरेको घोडा फरक कथा हो 😉
13 मई 2020 मा 15: 54
ठ्याक्कै मेरो कुरा, सम्मान केहि गलत छैन ...
13 मई 2020 मा 16: 12
मरेको घोडा अर्को कथा हो। माफी माग्दछु यदि म अत्यन्त क्रुद्ध भए पनि।
13 मई 2020 मा 17: 18
पूर्ण रूपमा बुझ्ने। तपाईंको प्रशंसाका लागि धन्यबाद।
मैले स्वीकार गर्नुपर्दछ कि मानवतामा थोरै आन्दोलन भइरहेको छ भन्ने कुराको खोजीबाट म धेरै निराश छु, तर जे भए पनि म आशाको साथ निरन्तर लाग्ने छु कि त्यहाँ एउटा टिपिंग पोइन्ट हुनेछ।
म विशेष रूपमा छक्क पर्दछु कि व्यक्तिले निवेदन दिन र एक बटन थिच्न पनि कष्ट दिदैन। त्यो काम मात्र seconds० सेकेन्ड हो। के अविश्वास वा डर यति ठूलो छ? एकदिन ती हजारौं अनुयायीहरूको पनि हो? वा यो वास्तवमै केवल चिप्स र बियर मनोरञ्जन हो।
13 मई 2020 मा 17: 28
केहि कम वर्तमान मामिला को स्थिति को प्रभावहरु बुझ्न। केहि जडानहरू र केहि कार्यहरूको नतीजालाई अझै पनी निश्चित EQ / IQ आवश्यक पर्दछ र म नामको अगाडि 'शीर्षक' भएको ईन्क्रन्ट्रान्टेड दासको कुरा गरिरहेको छैन।
एक हेलीकाप्टर दृश्य एक आवश्यकता हो, ब्लिन्करहरू राख्नु सजिलो छैन। त्यसैले म शारीरिक अन्धाको बारेमा कुरा गरिरहेको छैन 😉
13 मई 2020 मा 17: 56
मलाई लाग्छ धेरैले आफ्नो नाम र ठेगाना विवरण खुलासा गर्न चाहँदैनन्। उनीहरूको रोजगारदाता, 'क्यारियर', सुरक्षा सेवा AIVD इत्यादि आदिदेखि डराउछौ भाग्यवस हामी संवैधानिक राज्यमा बाँचिरहेका छौं। खोकी मोजा मा नायकहरु। सबै पछि, दासहरूको लागि कुनै जोखिम हुनु हुँदैन। कल्पना गर्नुहोस्।
13 मई 2020 मा 18: 00
मसँग एक पटक "साथी" (परिचित) थियो जो वर्षौंसम्म घरमा बेरोजगार थियो। यो विशेषज्ञ साइड विशेषता: डाटाबेसबाट डाटा जोड्ने र फिल्टर गर्ने।
कुनै समय उनी रिफ्रेस पाठ्यक्रम पछि काममा फर्किए।
प्रोफाइल विवरण: घर र बिक्रीको लागि महिला बिना नि: शुल्क।
जब मैले उहाँलाई सोधें कि यो राम्रो छ भने - उनीसँग सबै ज्ञानका साथ कि सरकारले जनतामा जासूसी कसरी गर्दछ - वास्तवमा निर्माणको लागि मद्दत गर्ने काम लिनुको सट्टा काम गर्ने ठाउँमा मोरमा एक झोलामा बसोबास गर्न। ठुलो भाई (बिग डाटा विश्लेषण) प्रणाली, उनको उत्तर थियो: “यो राम्रो हो कि म सम्भवत भित्रबाट परिवर्तन गर्न सक्दछु। र मैले लगभग मेरो घर गुमाएँ। अब म यहाँ बस्न सक्छु र मेरो कार चलाउँदैछु। ”
भित्रबाट त्यो परिवर्तन अझै देख्न सकिदैन 😉
नायकहरु कहाँ छन्? तिनीहरू उनीहरूको घरमा छन् र तिनीहरूको कार चलाउन जारी राख्न सक्दछन्।
13 मई 2020 मा 18: 23
के यो छोटो अवलोकन गरिएको र आफूले जेलमा बारहरू बनाउँदैछ जुन उसले आफूलाई डिजिटली लक गरिरहेको छ भन्ने महसुस नगरेको व्यक्तिको उत्कृष्ट उदाहरण होईन र?
13 मई 2020 मा 15: 41
जहाँ जर्मनी र फ्रान्समा Kampfgeist अझै केही जीवित छ, मदुरोडम शाब्दिक र प्रतीकात्मक रूपमा स्थिर छन्। शब्द प्रतिरोधको साथ एक मोड्ने सोच्दछ ..
13 मई 2020 मा 15: 44
यदि तपाईं बाहिर जानुहुन्छ भने आफ्नो मास्क लगाउनुहोस्
13 मई 2020 मा 15: 42
बुलबुले फुट्नेछ, र तपस्या पछ्याउँनेछ
13 मई 2020 मा 17: 48
हामीसँग शक्ति छ कि संसारमा त्यो बिरामी बाँकी ठूलो समस्या छ यदि तपाईं आफ्नो स्मार्टफोन फ्याँक्नुहुन्छ वा त्यो चीज प्रयोग गर्न रोक्नुहुन्छ भने, तिनीहरूले तपाईं माथि आफ्नो NWO नियन्त्रण गुमाए। तपाईंको छिटो गधा जेब स्पाइफोन बिना, तिनीहरूले अब तपाईं 24/7 निगरानी गर्न सक्षम हुनेछ र तिनीहरूको डिजिटल बबल पैसा जोखिममा छ जहाँ उनीहरू सबैलाई धक्का दिन्छन्।
त्यसोभए त्यो स्मार्टफोनलाई तपाईंको स्मार्टफोनमा व्यसन बिरोध गर्नुहोस्
14 मई 2020 मा 08: 00
मेरो लागि, कुनै फोन बाहिर काटिने छैन
13 मई 2020 मा 18: 10
कोरोना समर्थनको अंश फिर्ता गर्नु पर्ने खतरा: 'ठूलो गल्ती'
ठिकै मलाई लाग्छ कि यो ठूलो गल्ती होईन, तर बिल्डरबर्ग एजेन्डामा ठ्याक्कै मिल्छ पूरै मध्यमवर्गीय वर्गलाई ध्वस्त पार्नु र यसलाई सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न, यसैले धेरै mitarbeiters।
:33 10:१० रूटबाट: “म बलियो राज्यमा विश्वास गर्दछु। यो देशलाई सुदृढ राज्य चाहिन्छ। ” :34 23:२:XNUMX "हामी यस्तो मुलुक हो जुन यस केन्द्रमा गहिरो समाजवादी छ।"
सामान्य शंकास्पद स्टिग्लिट्जलाई केहि चीजहरू व्याख्या गर्न स्थिरबाट बाहिर निकालेको छ, त्यसैले अधिक केन्द्रीकरण। समाजवाद (टेक्नोक्रेटिक) साम्यवादको प्रवेशद्वार हो तपाईंलाई चेतावनी दिइयो!
26 मई 2020 मा 14: 18
त्यो ठीक बाहिर कार्य गर्दछ, प्रत्येक दिन सीटहरूको संख्यालाई नयाँ उचाइहरूमा हेरफेर गरिन्छ।
"इप्सोस र ईनभान्डागको सिट पोलमा, VVD 44 XNUMX सीटमा चढ्छ।"
13 मई 2020 मा 23: 57
एक आन्दोलन कसरी सुरू गर्ने https://www.youtube.com/watch?v=V74AxCqOTvg&t=81s
14 मई 2020 मा 11: 56
यो अब धेरै छिटो गइरहेको छ। नयाँ म्याकको प्रोटोटाइप। तपाइँले के गर्नु पर्छ समावेश सहित, तपाइँले अर्डर गर्न छुनु के हुन्छ (सबै अर्डरले उनीहरूसँग हात राखेर त्यस अर्डर चिन्ह, गल्ती पढ्नुहोस्) पढ्नुहोस्, हाँसोलाई ध्यानमा राख्नुहोस् र तपाइँ कहाँ हुनुहुन्छ, र तपाइँ कसरी व्यवहार गर्नुहुन्छ। सबै-देखीएको र सबै-अँगाल्ने एक आँखा प्रतीक अन्तर्गत। एक आँखा पनि के हो, एक आँखा एआई पढ्नुहोस्। पक्कै एक झिम्का रूपमा प्रच्छन्न।
« ठूलो परिवर्तन र ठूलो परिवर्तनको लागि समय: याचिकामा हस्ताक्षर गर्नुहोस्
तपाईंले कोविड -१ vacc खोप लिनु पर्छ वा अस्वीकार गर्नु पर्छ यदि यो अनिवार्य भयो? के गर्ने? »
कुल भ्रमण: 2.488.210